Mesut Ozil ayaa ugu dambayn ku soo biiray kooxda Arsenal waxana uu wadahadalo horumar leh kula jiraa kooxda DC United ee ka dhisan USA.
Ciyaaryahankii ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa Arsenal kaga soo biiray Real Madrid adduun dhan 42.5 milyan ginni sanadkii 2013, laakiin waayihiisii ​​garoonka Emirates ayaa ku soo dhammaaday si ceeb ah.
32-sano jirkaan ayaa laga reebay safka Arsenal ee Premier League iyo Europa League sababo la xiriira xiriirka xumaaday ee Mikel Arteta, laakiin waqtigiisa uu maqnaa waxay diiradda saartay tababarka shaqsiga ah iyo jir dhiska. baraha bulshada ayaa siiyay kalsooni badan taageerayaasha Arsenal.
DC United waxay ku dhowdahay inay heshiis la gasho Mesut Ozil, waxaana loo balan qaaday in mudada uu joogo Mareykanka uu lahaan doono guri weyn oo uu ku noolaado, xayeysiisyo iyo waxyaabo kale. kana dhaadhiciyaan inuu u guuro Mareykanka.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in DC United ay u sheegtay Ozil inay u dhaqmi doonaan sidii Wayne Rooney isla markaana uu dib ugu bilaabi doono xirfadiisa dalka Mareykanka.
Kubadsameeyaha reer Jarmal ayaa 254 kulan u saftay Arsenal tartamada oo dhan, wuxuu u dhaliyay 44 gool, waxaana uu kula guuleystay seddex FA Cup.
President Tshisekedi inaugurates the first school